Earbuds တွေက အိမ်တွင်းပုန်းကာလမှာ အသုံးဝင်ဆုံး Gadget ဖြစ်လာပြီလား?
Wireless Earbuds တစ်စုံရှိရုံနဲ့ တစ်နေ့တာအဖို့ ပြည့်စုံသွားတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
Earbuds အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုလို့ အလုပ်မရှိတဲ့အခါ စာဖတ်သူတွေ ဘယ်လို အပျင်းဖြေကြလဲ? ခုချိန်က COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ အပြင်ထွက် အပန်းဖြေဖို့လည်း မလွယ်၊ အိမ်တွင်းအောင်းရင်းပဲ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးနေကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ စာရေးသူပီပီ တစ်နေ့တစ်နေ့ တက်လာတဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်ဖြစ်တယ်၊ ထူးခြားတာမျိုးတွေ့ရင် ဘာသာပြန်ပြီး ဗဟုသုတအဖြစ် စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရှုဖို့ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
တခြားအချိန်တွေမှာတော့ ဂိမ်းကစားတာ ၊ တေးသီချင်းနားဆင်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပေမယ့် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Lifestyle တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ပြောင်းလဲနေတာ သတိထားမိကြရဲ့လား?
ခါတိုင်းလို အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရတာမျိုး မရှိတော့သလို အများစုက စမတ်ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို နားစွင့်ကြတယ်၊ သက်ကြီးတွေကတော့ ရေဒီယို ၊ ရုပ်သံကြည့်ပြီး ကပ်ကာလ ပြီးဆုံးမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်။
အလုပ်လက်နဲ့မပြတ်မှ နပ်မှန်မယ့်သူတွေကျ အိမ်ကနေ (Work From Home) လုပ်ရင်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်နေကြသလို အခုလို Lifestyle ပြောင်းလဲကာစ အချိန်မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာတဲ့ Gadgets တွေ သတိထားမိပါသလား။
စာရေးသူ မိသားစုရဲ့ မိခင်ဆို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ တရားနာဖို့ နားကြပ်ဘယ်မတုန်း လိုက်မေးတတ်သလို သတင်းနားထောင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုဖို့ ရှာခိုင်းတတ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာ ဖုန်းတစ်လုံး၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ရှိထားရင် အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒုတိယ အရေးပါသူလို ဖြစ်နေတာပါ။
ဥပမာ ဂိမ်းမာဆိုရင် ဂိမ်းဆော့ဖို့ နားကြပ်၊ Earphones ၊ Mic အစရှိတဲ့ Gadgets တွေ အရေးပါသလို အင်တာနက်ကြည့်ရင်း၊ စာရိုက်ရင်း အချိန်ဖြုန်းတတ်သူတွေကျ နားကြပ်တစ်စုံကို နားမှာချိတ်ရင်း စကားပြောတယ်၊ သီချင်းနားထောင်တယ် စသဖြင့် အချိန်ကုန်လွန်စေပါတယ်။
ဒီလို တစ်ကိုယ်တော် Relax လုပ်ဖို့ ဖုန်းနဲ့ နားကြပ်တစ်စုံ ရှိထားရင် ပြည့်စုံသွားrသလို ဂိမ်းကစားဖြစ်တဲ့ အသံကြည်လင်ပြတ်သားမှု ၊ တိကျမှုရှိဖို့အတွက် လိုကိုလိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကပ်ကာလမှာ ကစားဖြစ်နေတဲ့ World War Z လို ဖုတ်ကောင်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးမှာ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ အကောင်ကို Relocate လုပ်ဖို့ နားကြပ်စွမ်းပကား လိုပါတယ် (မတပ်ထားရင် တွယ်ခံရတာများပါတယ်)
ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါနဲ့ တေးသီချင်းနားဆင်တဲ့အခါမျိုးမှာ နူးညံ့တဲ့သံစဥ်နဲ့ တုန်ခါမှုအားကောင်းတဲ့ Bass သံကို နှစ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်က အများအားဖြင့် ခပ်မြူးမြူး သီချင်း၊ Relax Songs တွေနဲ့ ဟာသကား၊ Action ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖုန်း ၊ Laptop Speaker နဲ့ ဘယ်တော့မှ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
But with Better Quality
ဖွဲတယ်တယ် ခပ်အအ အသံကို မနှစ်သက်လို့ နားကြပ်နဲ့ပဲ နားဆင်ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတလေ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက် လုပ်ဖန်များလာတော့ ဝိတ်တက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ မလွယ်ပေဘူး ဆိုပြီး မနက်တန်း သက်လုံလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ညဖက်တွေမှာ အဆီချ (ယောဂ) လေ့ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြောနေတဲ့ Lifestyle က စာဖတ်သူမှမဟုတ် ကပ်ရောဂါ ကျော်ဖြတ်နေရသူတွေ ကြုံနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နှစ်သက်သလို ဥပမာ Work-out လုပ်တာ၊ အလုပ်လုပ်ရင်း စိတ်ကြိုက် အပန်းဖြေတာမျိုးနဲ့ တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါတိုင်း ပင်ပန်းတာနဲ့ ပျင်းရိတဲ့ လက္ခဏာ နှစ်ရပ်ကြောင့် ပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ရံဖန်ရံခါ စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ မြူးမြူးကြွကြွ သီချင်းနားဆင်ရင်း (ပိန်အောင်) ကိုယ့်ဘာသာ ခွန်အားပေး လုပ်နေရပါတယ်။
တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး၊ ကပ်ရောဂါကြောင့်သာ အိမ်တွင်းအောင်းနေရပေမယ့် မတရားပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ် (တချို့ရပ်ကွက်နဲ့ နေရာဒေသတွေ Lock Down ချခံထားရင် ထွက်မရ ၊ ပြုမရနဲ့ သီချင်းနားထောင်လိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်၊ ဂိမ်းကစားလိုက်နဲ့ ကျော်လွန်နေရတာပါ)
ကြားထဲ အဆူခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို မပြောလိုပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရာက စာဖတ်သူတွေရော တနေ့တာ ဘယ်လို အချိန်ကုန်ဆုံးနေကြသလဲ?
ကျွန်တော် ရေးဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းရာထဲ ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်နိုင်ပေမယ့် အသိပေးလိုတာက အရည်သွေးကောင်း နားကြပ်တစ်စုံ လိုအပ်နေရင် မေလထဲ ရောင်းချဖို့ ရှိနေတဲ့ Enco Earbuds တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Earbuds ကို OPPO ကနေ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်တွေက True Wireless ဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Ear-tips နှစ်စုံပါဝင်ပြီး AI နည်းပညာနဲ့ Noise Cancellation လုပ်ပေးမယ့် နည်းပညာ သုံးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်ရင်း စကားပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြင်ပနှောက်ယှက်သံတွေ လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 25hr Playback Support ပေးထားပါတယ်။ Audio Control ပိုင်းအတွက် Slide & Tap Touch Controls ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အဖြူရောင်နဲ့ အနက်ရောင် နှစ်ရောင် ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
စာဖတ်သူတွေ သိရှိရအောင် အသေးစိတ် အချက်လက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
Enco Free Earbuds Enco W31 Enco M31
Colour White/Black Black Black
Driver 13.4mm 7mm 9.2mm
Sensitivity 120dB@1kHz 95dB@1kHz 101.9dB@1kHz
Response Range 16Hz ~ 20kHz 20Hz ~ 20kHz 20Hz ~ 40kHz
Mic Sensitivity ~ 42dBv/Pa ~ 38 dBv/Pa ~ 38dBv/Pa
Wireless Range 10m 10m 10m
Battery 31mAh/ 410mAh (Case) 25mAh/ 350mAh (Case) –
Playback Time 5hr (Single Charge)/ 25hr (with Case) 3.5Hr (Single Charge)/ 15hr (with Case) 12hr
Charging Time 70min/ 110 min (Charging Case) 2.5hr –
Water Resist IPX4 IPX4 IPX5
Weigh 48.2g 50g 22g
Price 139,000 MMK 69,900 MMK 49,900 MMK
Enco Free Earbuds ကိုတော့ မြန်မာငွေ ၁၃၉,၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေပြီဖြစ်ကာ Enco W31 ကို ၆၉,၉၀၀ ကျပ်၊ Enco M31 ကိုတော့ ၄၉,၉၀၀ ကျပ် နဲ့ မေလ ၂ ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး မိတ်ဆက်ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မေလ 1 ရက်ကနေ 31 ရက်အတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ OPPO Reno Series (Reno3 Pro, Reno3, Reno2 & Reno2 F) ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုနဲ့ OPPO Enco Free ကို တစ်ပါတည်းဝယ်ယူသူများအတွက် ကျပ် 20,000 တိတိကို ပြန်အမ်းငွေအဖြစ် ပေးအပ်သွားမယ့် အစီစဥ်လည်း ရှိပါတယ်။
Wireless Earbuds အကြောင်းပြောဖြစ်တာ အခုဖော်ပြသွားတဲ့ Lifestyle ကို တစ်ဖက်တလှမ်းကနေ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကြိုးတန်းလန်းကြီး ဖြစ်မနေစေဘူး၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတွေအတွက်ဆိုရင် ပိုသင့်တော်တဲ့အတွက် ခုလိုကာလမျိုးမှာ အသုံးဝင်တဲ့ Gadget တစ်မျိုးလို့ ပြောရမှာပါ။
OPPO Myanmar သတင်းအား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Snapdragon SoC နဲ့ မြင်တွေ့ရမယ့် OnePlus Z
Apple ရဲ့ iPhone 12 Series မှာ ဖုန်း Model လေးမျိုးပါ၀င်လာမယ်